Tuesday November 29, 2016 - 20:57:30 in Wararka by Super Admin
Afhayeenka ciidanka Xarakada Al Shabaab Sheekh Cabdul Casiis Abu Muscab ayaa isagoo warysi siiyay idaacadda Islaamiga Andalus waxa uu ka hadlay hawl gallo kala duwan oo mujaahidiinta ay ka fuliyeen qeybo ka tirsan dalka Soomaaliya.
Sheekha ayaa ugu horreyn waxa uu wareysigiisa ku bilaabay hawl gal ciidanka mujaahidiinta ay ka fuliyeen duleedka magaalada Boosaaso kaasoo khasaare lagu gaarsiiyay ciidanka dowladda Federaalka.
Sidoo kale sheekha ayaa wax laga weydiiyay hawlgal xalay ciidamo Mareykan ah ay isku dayeen inay ka sameeyaan degmada Tooratooroow,Waxa uu sharaxay sheekha qaabka ay weerarkaasi ku bilaabeen ciidanka cadowga iyo sida uu usoo gaba gaboobay.
Waxay isku dayeen inay argagax galiyaan dadka shacabka ah sidii ay horay u sameeyeen laakiin wey ku guul darreysteen ayuu yiri Sh cabdul Casiis oo waxaa lagu khasbay inay jiiraan geedaha oo ay ka cararaan magaalada iyagoo ka tagay qaar ka tirsan hubkii ay kusoo duulaan tageen ayuu yiri.
Dhageyso Wareysiga Sh Cabdul Casiis Oo Dhinacyo Badan Taabanaya.